Gaazexessaan waraana Itiyoo-Ertiraa irratti hirmaate maal yaadata? - BBC News Afaan Oromoo
Gaazexessaan waraana Itiyoo-Ertiraa irratti hirmaate maal yaadata?
Goodayyaa suuraa Loltoota Itoophiyaa erga magaalaa Ertiraa Baareentuu to'ataniin booda
Waranni Itoophiyaafi Ertitaa gidduutti taasifame waggaa digdama lakkoofsiseera. Namoonni muxannoo waa'ee waraana kanaa bifa gara garaan yaadatu.
Kanneen yaadannoosaanii nuuf qooda keessaa, Obbo Mokonnin Birruu Dhaabbata Pireesii Itoophiyaarraa duuluun marsaa lamaaf waa'ee waraanichaa addawwan waraanaa sadiirraa gabaasanii turan. Isaanis waan yaadatan BBC'tti himaniiru.
Obbo Mokonnin waranni osoo hin jalqabamiin dura kaasee marsaa lamaan addawwan waraanaa sadii: Baadimmee, Tsooranaafi Zaala-Ambassatti bobba'uu dubbatu. Marsaa duraa deemaniin, haala naannoo daangaa sanaa, qophii waraanaaf taasifamaa ture, haamileefi onnee raayyaa gabaasaa turu dubbatu.
Haalli itti gabaasaa turanis, kallattii itti kennameefi gam-tokkee akka ta'e kan dubbatan Obbo Mokonnin, "Yaadannoo achi ture waan baayyedha," jedhu.
Walumaagalattis gabaasni taasifamaa kan ture haala gaazexxeessaan hubateetti osoo hinturree, erga garee gaazexeessitootaa miidiyaalee adda addaa irraa fudhaniin mari'atameen booda dhimma barbaadame tokko qofarratti xiyyeefachuun akka gabaafamaa ture yaadatu.
Dursa shaakala adda waraanaarraa gabaasuu hinqabu
Akka Obbo Mokonnin jedhanitti, addi waraanaa irratti bobba'anii gaabaasaa turan sadanuu rakkisoodha. "Anaaf waanti baayyeen adda ture. Osoon achi hin deemiin dura sagalee dhukaasaa kanan beeku yeroo gammachuu ykn gaddaarratti yoo namni du'ee ture. Achitti garuu sodaachisaadha," jedhu.
Kanaafuu leenjiifi shaakala gabaasa adda waranaa tokko malee waan deemaniif dubbiin caalaa hammmaataa akka ture ni yaadatu.
Keessattuu dhimma Zaalambassaatti yaadatana yoo ibsan, ''waraanni gamanaafi gamasiin kan Itoophiyaafi Ertiraa randa qabatanii walitti kiyyeefachuun wal eeggatu turan. Waan ta'eefuu, uffata adii ta'e uffatanii socho'uun akka hin danda'amne himuu Obbo Mokonnin. Akkasumas, ''Socha'anii yaada namootaa gaafachuuf haalaan rakkisaa ture,'' jedhu.
Waa'ee Adda waraanaa Tsooranaa yoo dubbatanis, ''teessumni lafa naannoo adda waraana sanaa gaara waan baayyatuuf, goggeessi loltoonni biyyoota lamaanii gidduu ture baayyee sodaachisaa ture'' jedhu. "Lafa sulullaa sana keessaa foliin bahu gaarii hinturre sababii namoonni baayyeen achitti ajjeefamaa turaniifu," jedhu.
Marsaa duraatiif yoo deeman ogeessi kaameraa dhaabbaticha irraa waliin ergaman Zawuduu Tilaahun dabalatee, gaazexeessitoonni televiziinii lama guyyadhuma waraanaa jalqabaatti kenneen wareegaman keessaa akka turan dubbatu. Guyyumaa waraanni itti jalqabametti gaazexeessota sadiitu wareegaman jedhu.
Haa ta'u malee, osuma haala sana hubatanu dirqama hojii itti taanaan, marsaa lammaffaas deebii'anii akka adda waraanaatti imalan yaadatu Obbo Mokonnin. "Namni yoo du'u fi dhiigni yoo dhangala'u ni argita."
Keessattuu galgala tokko waraanni Ertiraa magaala Zaalambassaa rukkutuuf akka jiru raadiyoon ergaan akka namoonni gadi dhiisanii bahu qaban ajajjii dabarfamee ture jedhu.
"Namoonni hunduu magaala keessaa erga baafaniin booda gareen gaazexeessitootaa qofa hafne. Yeroo sanatti waraabuufi suuraa kaasuuf bakka qabannee amma dhukaafama jechuun eegaa turre," jechuun ibsu Obbo Mokonnin.
"Nama walitti dhiyaattee waliin dabarsite yeroo deebitee dhabdu baayyee nama gaddisiisa.
Mokonnon Birruu, Gaazexeessaa Dhaabbata Pireesii Itoophiyaa duraanii
Haalli adda waraanaa sanarra ture baayyee ulfaataa ta'uusaa kan ibsan Obbo Mokonnin, namoota yeroo marsaa duraaf gara adda waraanaa gabaasaaf itti bobba'anitti kan wal baran hedduu yeroo marsaa lammaffaaf deebii'anii deeman lubbuun dhabuusaaniiti.
"Nama walitti dhiyaattuu yoo dhabdu baayyee nama gaddisiisa. Namoota akkasii hedduutu turan. Haalli ittiin du'an yeroo namatti himan nama gaddisiisa," jechuun kan yaadatan dubbatu.
Obbo Mokkonnin waan alkan tokko bakka siree qabatan isaan mudate ture ni yaadatu. 'Alkan keessaa gara saatii sadiirraa osoo Raadiyoo Sagalee Ameerikaa dhaggeeffataa jiranuu, naannoo sanaa sagaleen wayii dhaga'ame' jedhu. Naannoo sanas loltoonni ni dhufu ture jedhu.
"Sagaleen dhukaasaa dhagahame sun boombiitu mana tokko keessatti dhowee loltuu achi ture tokko achumatti foon isaa diige," jedhan. Haa ta'u malee diinatuu itti dhukaaseef namichuma wareegame kanati ofumasaa ofitti dhoosee waanti beekame hin jiru.
Boodarra garuu jedhan Obbo Mokonnin, bakka sana reefuu waan jijjiiramanii deemaniif haaraa ta'uu isaaniirraa kan ka'e shakkamuun akka qabaman dubbatu. Kan ta'e ta'ee, erga qulqulleeffatanii booda hiikamanis, mudannoo hanga harr'aa yaadataniidha.
Dargaggoonni, ga'eessonniifi ogeessonni biyyaa kuma dhibba hedduun irratti lubbuu dhabaniiru, madaa'aniirus.
'Sababiin namoonni hedduun ittiin dhuman sirrii hinturre'
Obbo Mokonnon yeroo ammarra taa'anii waraana sana yaadatan, mareetiin salphaatti furamuun osoo danda'amuu lubbuun amma kana baayyatu wareegamuun sirrii miti jedhu.
Keessattuu, sadarkaa gaggeessitootaatti osoo mariyatanii rakkoo waldhabdee uumame furuun akka danda'amu kan dubbatan Obbo Mokonnon, lubbuun namootaa hedduufi qabeenyi kun martuu itti baduusaa sirrii miti jedhu.
'Nuti gara adda waraanaatti kuun ammoo barumsaaf biyya alaatti ergamaa turan'
Marsaa lammaffaaf maalii fi attamiin akka filamanii gara adda waraanaa ture sanatti ergaman, Obbo Mokonnin miira addaan yaaddatu. Tarii hojiirratti waan cimoo taaneef, yookaan waan amanamoo taaneef nu filan jedhu. Akkasumas dhiibbaadhaan ta'uu danda'a jedhu.
"Garuu akkan waajjira sana gadi dhiisu kan na kakaasan keessaa kun dhimma tokko. Yeroo nuti adda waraanaatti ergamaa turre, namoonni biraa ammoo barumsaaf biyya alaatti ergamaa turan," jedhan Obbo Mokonnin.
Gaggeessitoonni addunyaa 'baqattummaa to'achuuf' karoorfatan